Ikhaya Forex MT5 Izinkomba Inkomba Yokusekela Nokumelana Ne-MT5
Isingeniso Sesikhombi Sokusekela Nesokumelana (MT5)
1 Isingeniso Sesikhombi Sokusekela Nesokumelana (MT5)
2 Siyini Inkomba Yokusekela Nokumelana?
3 Isebenza kanjani Inkomba Yokuxhasa Nokumelana?
4 Ungasisebenzisa kanjani isibonisi sokuxhasa nokumelana seMT5
5 Thengisa Ukusetha Kwezentengiselwano
6.1 MT5 Izinkomba – Thwebula Imiyalelo
6.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ukuhweba Platform
Kunezindlela eziningi zokukhomba amazinga we-Support and Resistance. Abanye abathengisi bahlela izitayela ezihambisanayo neziteshi njengezinga lokusekelwa nokumelana. Abanye basebenzisa ukwesekwa okuvundlile namazinga wokumelana. Abanye abathengisi ngesandla uhlela ukwesekwa kanye ukumelana imigqa. Abanye basebenzisa izinkomba ukukhomba amazinga anjalo.
Inkomba yeSupport and Resistance iyithuluzi elizenzela ngokuzenzakalela ukwesekwa okuvundlile nokumelana nokusiza abahwebi ukuthi babone amazinga entengo anjalo ngokungafanele.
Siyini Inkomba Yokusekela Nokumelana?
Isikhombi Sokuxhaswa Nesokumelana siyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso ehlela ngokuzenzakalela ukwesekwa okuvundlile namazinga wokumelana.
Ihlela amachashazi e-lime akha ngokuvundlile ukumela amazinga wokumelana, namachashazi e-magenta nawo akha ngokuvundlile ukumela amazinga okusekela.
Isebenza kanjani Inkomba Yokuxhasa Nokumelana?
Lesi sikhombisi se-Support and Resistance sakha ukwesekwa okuvundlile namazinga wokumelana ngokuya ngama-fractal, noma ama-pivot highs ne-pivot lows.
Le ndlela yokuhlonza ukwesekwa kanye namazinga okumelana nayo isetshenziswa kakhulu ngabadayisi abaningi. Intengo ibivele ihlehlisiwe kumazinga entengo anjalo ngokomlando. Ngakho, futhi kungenzeka kakhulu ukuthi imakethe nayo icubungule amazinga anjalo njengokusekelwa noma amazinga wokumelana lapho intengo ingahlehlela emuva noma iphume kusuka.
Ungasisebenzisa kanjani isibonisi sokuxhasa nokumelana seMT5
Njengoba amazinga akhonjwe yile nkomba eyamazinga wokusekela avumelekile, abadayisi bangakwazi ukuhweba ngokususelwa kulawa mazinga kanjalo.
Abahwebi bangathengisa ukubuyiselwa emuva noma ukuphuma ngokuya ngokuthi isenzo sentengo sixhumana kanjani nalawa mazinga. Nokho, ngoba la mazinga osekelo nokumelana ngandlela thile asuselwa esikhathini esifushane, kuzoba nezimo eziningi lapho amazinga ebengeke abambe njengezinga lokusekela noma lokumelana. Ngenxa yalokhu kungaba ukuhlakanipha okukhulu ukuhweba okuphumayo kulawa mazinga kunokuguqulwa kwezentengiselwano.
Ngoba la mazinga angamazinga wokusekela nawokumelana, ingasetshenziswa futhi njengesisekelo sokubekwa kokulahleka kokuyeka. Abathengisi abanolaka abangafuna ukukhama inzuzo eningi ekuphumeni bangasebenzisa lawa mazinga ekulahlekelweni kokuyeka kokuma.
Vula ukuhweba kokuthenga njengoba ikhandlela lokuphuma le-bullish livala ngaphezu kwezinga lokumelana ngomfutho oqinile. Setha ukulahleka kokuma ezingeni lokusekela elibhekene nokuphuma okunamandla.
Ukulandelela ukulahleka kokuma ngaphansi kwamazinga okusekela njengoba ileveli ngayinye ikhonjwa yinkomba. Ukuhweba kuzovalwa ngenzuzo njengoba ukulahleka kwesitimela okulandelwayo kutholwa.
Vula ukuhweba okuthengiswayo njengoba ikhandlela le-bearish breakout livala ngezansi kwezinga lokusekela ngomfutho oqinile. Setha ukulahleka kokuma ezingeni lokumelana okuphambene nokuphuma kwe-bearish.
Ukulandelela ukulahleka kokuma ngaphezu kwamazinga wokumelana njengoba ileveli ngayinye ikhonjwa yinkomba. Ukuhweba kuzovalwa ngenzuzo njengoba ukulahleka kwesitimela okulandelwayo kutholwa.
Lesi sikhombisi senkxaso nesokumelana singelinye ithuluzi abathengisi abangangeza ku-arsenal yabo. Abahwebi bangayisebenzisa noma njengesibonisi sokuphuma kwesiginali esivela ekucinaneni kwemakethe noma njengengxenye yokuhlehla kwethrendi.
Ukusebenzisa le nkomba ekuphumeni kokulahleka kwesitimela nakho kungasebenza kubahwebi abangafuna ukuhlala nomkhuba kuze kube kuphela. Nokho, le ndlela akuyona inqubo ephumelela kunazo zonke yokuphuma kwezohwebo.
Le nkomba iyithuluzi kuphela futhi kusamele isetshenziswe njengengxenye yecebo.
Isikhombi Sokuxhaswa Nokusiphikisa seMT5 yiMetatrader 5 (MT5) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Inkomba Yokuxhasa Nokumelana Ne-MT5 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Support and Resistance Indicator ye-MT5.mq5 ku-MetaTrader yakho 5 Ishadi?
Landa Inkomba Yokusekela Nokumelana ne-MT5.mq5
Kopisha Inkomba Yesixazululo Sokuphikisa seMT5.mq5 ku-Metatrader yakho 5 Directory / ochwepheshe / izinkomba /
Qhafaza kwesokudla ku-Inkomba Yesixazululo Sokuphikiswa se-MT5.mq5
Inkomba Support and Resistance Indicator for MT5.mq4 iyatholakala kwi Ishadi yakho
Ungayisusa kanjani inkomba yokusekela nokumelana ne-MT5.mq5 ku-Metatrader yakho 5 Ishadi?
Inkomba Yokusekela Nokumelana Ne-MT5 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleV Grid Line Custom MT5 Indicator
Isiqephu esilandelayoIsilinganiso Sobubanzi Bansuku zonke be-MT4